Kely io isa io raha oharina amin’ny isan’ny mponina, indrindra ny fanampiana ireo olona manana fahasembanana mba ho afaka handray anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena. Ny mampalahelo anefa, hoy ny filohan’ny fikambanana Randrianasolo Norbert dia mbola misy amin’ireo mpikambana efa vitsy ireo ihany no alefa manao asana mpitsabo mpanampy rehefa tonga eny anivon’ny hopitaly fa tsy manao ilay asa tena nilofosany tamin’ny fianarana. Manao antso avo amin’ny fitondram-panjakana izy ireo hijery akaiky ny olany. Fantatra ihany koa fa anisan’ny olana mbola sedrain’izy ireo eo am-panatanterahana ny asany ny tsy fahafahan’ny mpiara-belona. Manomboka amin’ny 5.000 Ar monja anefa dia efa afaka manamboatra ireo fitaovana ilaina amin’ny solon-tongotra hatramin’ny 660.000 Ar. Mila fanohanana ihany koa izy ireo amin’ny lafiny ara-pitaovana ankoatra ny fanamafisana ny fanofanana. Nanatanteraka ilay kongresy andiany fahavalo tetsy amin’ny AFT Andavamamba izy ireo omaly. Haharitra telo andro izy io, hatrehin’ireo mpikambana rehetra.